Ku dhawaad 60% korontada dalka Liberia waa la xadaa - Worldnews.com
Ku dhawaad 60% korontada dalka Liberia waa la xadaa
Xatooyada ayaa sannad kaste dawladda kaga khasaarta 35 milyan oo doolarka Maraykanka ah, sida ay
MSF oo soo afjartay qorshihii ay Mujaajiriinta badda uga badbaadin jirtay
Hay'adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa lagu qasbay in ay soo afjarto qorshihii ay ku badbaadin jirtay dadka ku tahriibada badda...
Hoteel caalami ah oo lagu eedeeyay inuu faafiyay sawirka haweeney qaawan
Haweeney ka soo jeedda gobolka, Chicago ee dalka Maraykanka ayaa maxkammad la tiigsanaysa shirkadda Hhoteellada caalamka ee Hilton, waxayn dalbanaysaa in magdhow ahaan loo...
Shaqaale Shiinays ah oo loo ganaaxay in aysan sidii looga baahnaa u lugayn
Shirkad Shiinaha laga leeyahay ayaa aad loo dhaliilay ka dib markii ay soo baxday in ay shaqaalaheeda ganaaxdo haddii ay bishii socon waayaan 180,000 oo tallaabo, sida ay...
Dhallinyaradan Soomaaliyeed oo iyagoo maxaabiis ah haddana Musqtaqbalkooda dhisaya
Maxaabiista ku xiran deegaannada Soomaaliya intooda badan waxay dhibaatooyin kula kulmaan jeelka, laakiin xabsi ku yaalla magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa ka mid...
Kala bar dadka Maraykanka oo uu xabsi galay qof qoyskooda ka tirsan
Ku dhawaad kala bar dadka qaangaarka ah ee Maraykanka ayaa waxaa la sheegay in qof ehelkooda ah qofkasta uu ku jiro xabsiyada dalkaas sida lagu sheegay daraasad cusub oo...
Da'yarta ugu badan waxay ku dhintaan shil baabuur, maxay tahay sababta?
Hay'adda Caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa daabacday tirooyin muujinaya in qaaradda Afrika ay tahay halka ugu sarraysa ee ay ka dhalato dhimashada la xiriirta shilalka...
Da\_'yarta ugu badan waxay ku dhintaan shil baabuur, maxay tahay sababta?
Hay'adda Caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa daabacday tirooyin muujinaya in qaaradda Afrika ay tahay halka ugu sarraysa ee ay ka dhalato dhimashada la xiriirta shilalka gawaarida. Dhanka kale hay'adda ayaa sheegtay in shilalka gawaarida ugu badan ee ay ku le'daan dadka dhalinyarada ah. Warbixinta ayay hay'adda sidoo kale ku sheegtay in waddamo badan oo ka tirsan Afrika iyo...
Wiil 7 jir ah oo $22 milyan ka sameeya Youtube-ka
Wiil 7 sanno jir ah oo ka faalooda qalabka ay carruurta ku ciyaaraan ayaa la sheegay in uu noqday qofka lacagta ugu badan ka sameeya shabakadda Youtube. Sida ay qortay majalladda Forbes ee looga hadlo hodantinimada adduunka ayaa lagu sheegay in sannadkii wiilkan yar uu sameeyo $22 milyan doolar, lacagtan oo aysan ku jirin canshuurtii laga qaadi lahaa iyo qarashaadkii kale....
Waa wado godad badan oo ku taal degmadada Kajiado ee Kenya. Waa meel aad u kulul oo boodh badan. Waxa maraya laba nin oo xoolo dhaqato ah oo huwan go'yaasha guudan ee ay caanka ku yihiin dadka halkaa ku nooli. Waxa ay carraabinayaan ilaa lixdan neef oo lo' ah, waxaanay sheegeen in ay ka yimaadeen dalka Tanzania. Laba sanadood halkaa roob kama da'in, xoolo dhaqato badan oo...
Muuqaal sir ah oo laga duubay nin ka shaqeeya dalabaadka oo cuney cunto uu geynayay
Waxaa shaqada laga eryay nin ka shaqeeya shirkad qaabilsan dalabaadka cuntooyinka ee macaamiisha guryaha loogu geeyo, kadib markii aad loo faafiyay isaga oo cunaya cunto baakadeysan oo uu geeynayay, kadibna uu dib u daboolay hambadii cuntada. Markii hore dadka isticmaala baraha bulshada ayaa muuqaalka ku tilmaamay mid yaqyaqsi leh, islamarkaasna muujinaya...
Itoobiya: Xamza Xaamid oo dhigta jaamacadda Gonder wuxuu allifay Koronta xarig la\_'aan ku shaqeyneysa
Xamze wuxuu ogaaday inuu awood u leeyahay inuu wax cusub uu allifo xilli uu yaraa oo uu dhiganayey fasallada seddexaad iyo afaraad inta badan hal abuurradiisu waxay la xiriireen korontada iyo qalabka korantada ku shaqeeya. Xagga waxbarashada caadiga ahna waa wiil aad ugu firfircoon oo fasalka uu ku jira kaalmaha ugu horreeya ka gala, wuxuuna si gaar ah uu u jecel yahay...